प्रदेशसभामा गर्जिए मुख्यमन्त्री राउत, कांग्रेस र कम्युनिस्टको सातो गयो! ओलीको कुर्सी हल्लियो -
प्रदेशसभामा गर्जिए मुख्यमन्त्री राउत, कांग्रेस र कम्युनिस्टको सातो गयो! ओलीको कुर्सी हल्लियो
२२ आश्विन २०७५, सोमबार १२:२६ 234 पटक हेरिएको
जनकपुर। प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारप्रति कडा आक्रोश पोखेका छन्। जनकपुरमा प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले कांग्रेस र केन्द्र सरकारको रवैयाविरुद्ध धावा बोलेका हुन्।
उनले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयक र करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयकविरुद्ध सक्रिय भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलमाथि आक्रोश पोखे। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अपांग बनाएर राख्न खोजेको र प्रदेश सरकारले जनतामा आफ्नो उपस्थितिको अनुभूति गराउन खोजेपछि विरोध गरेको भन्दै राउत उनीहरूमाथि आक्रोशित भएका हुन्।
‘पाँच हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको प्रदेशमा पाँच सय कर्मचारी पनि छैन। दिनहुँ हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटना बढ्दो छ’ आइतबार प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख सरोजकुमार यादवसँग विशेष समय मागेर बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘कर्मचारी नै नभएपछि तपाईंहरू (सांसद) ले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट पाउनु भएको बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छरु अनि जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिन नसकेपछि मतदातालाई के जवाफ दिनुहुन्छ?’
संविधान जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले औंल्याएको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउन संघीय सरकारले चासो नदेखाएकोमा उनले आक्रोश पोखे। ‘गत जेठ महिनामा प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक बनाउन सुरु गरेपछि प्रदेशका प्रमुख सचिवमार्फत गृह मन्त्रालयले चार महिना पर्खिन भन्यो । हामी पाँच महिना कु-यौं तर पनि केही नभएपछि बाध्य भएर अघि बढेका हौं’ उनले भने । हालै सरकारले नेपाली प्रहरीको भर्नासम्बन्धी विज्ञापन गरेको विषयमा पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्।